मधुमेहको पहिचान गरौं - स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
- डा. अंशुमाली जोशी
कार्तिक २९, २०७३-मधुमेह विशाल र बढ्दो भारको रूपमा विकास भैरहेको छ । अहिले संसारभरिका करिब ४२ करोड मानिसहरू मधुमेह रोगबाट पीडित छन् । सन् २०४० सम्म ६४ करोड मधुमेहीको संख्या पुग्ने अनुमान गरिन्छ । हाल विश्वमा रहेका ११ जना मानिसहरूमध्ये १ जना मानिस मधुमेहबाट पीडित छन् । ५० प्रतिशतभन्दा पनि बढी मधुमेहीको संख्या अहिले पश्चिमी प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र र दक्षिण—पूर्वी एसियामा छ । करिब ८० प्रतिशत मधुमेहका रोगीहरू विकासोन्मुख गरिब देशहरूमा छन् । बढ्दो मोटोपनको कारणले गर्दा बच्चाहरूमा पनि मधुमेह देखिँदैछ । तथ्यांक अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको करिब ८.४ प्रतिशत जनसंख्या मधुमेही छन् ।
अहिले संसारमा ५० लाख मानिसहरूको मधुमेहको कारण वर्षेनि मृत्यु भैराखेको छ । हरेक ६ सेकेन्डमा १ जनाको मृत्यु हुने गर्छ । मधुमेहमा यति धेरै चासो हुनुका कारण अहिले संसारभर महामारीको रूपमा फैलिँदै गएको हुनाले उपयोगी जनशक्तिमा कमी आउने हुनाले, बेलैमा ध्यान नदिँदा उपचार महँगो पर्नजाने हुनाले र मृत्युदर बढी हुनाले हो । कुनै पनि देश, वर्ग, जाति, धनी—गरिब, पुरुष वा महिला, बालक, वृद्धसमेत यस रोगबाट अछुतो छैनन् ।
अहिले पनि मधुमेहीहरूमध्ये ५० प्रतिशतमा आफूलाई मधुमेह लागेको जानकारी छैन । लक्षण सबैलाई नहुने हुनाले धेरै मानिसलाई लामो समयसम्म मधुमेह भैराखेको हुनसक्छ र जब यो पत्ता लाग्छ, त्यो बेलासम्म यसको दीर्घकालीन असरहरू देखा परिसकेको हुनसक्छ । प्रत्येक व्यक्तिले स्वस्थ जीवनशैली अपनाएमा ७० प्रतिशत मधुमेह रोकथाम गर्न सकिन्छ र सन् २०४० सम्म मधुमेही रोगीको संख्यामा १६ करोडले कमी ल्याउन सकिन्छ । यो वर्ष २०१६ को विश्व मधुमेह दिवसको मुद्दा ‘मधुमेहमा नजर राख्ने’ राखिएको छ । यो वर्षको मुख्य सन्देश भनेको मधुमेहको लागि एकपटक भए पनि टेष्ट गरेर यसको दीर्घकालीन जटिलताबाट बचौं भन्ने छ । अहिले पनि संसारमा करिब ३० करोड मानिसलाई मधुमेह भएर पनि थाहा नभएको हुनाले उनीहरूलाई परीक्षण गर्नुपर्ने धेरै आवश्यकता देखिन्छ ।
विश्वमा अहिले वर्षेनि ६.७३ खर्ब अमेरिकी डलर मधुमेह र यसको जटिलताहरूको उपचारमा खर्च भैराखेको छ । जति मधुमेहको जटिलता बढ्छ, उति उपचार खर्च महँगो पर्न जान्छ । अहिले संसारमा हरेक हप्ता मधुमेहका कारण १४० जनाको खुट्टा काट्नुपर्ने अवस्था छ भने १४०० जनालाई मुटुले राम्रो काम नगरेको अवस्था र ५४० जनालाई पक्षाघात भैरहेको अवस्था छ । त्यस्तै मधुमेह नियन्त्रणमा नराखे अन्धोपनको सम्भावना २५ गुणा बढी र मिर्गौला बिग्रिने सम्भावना ५ गुणा गढी हुन्छ । त्यसैकारण यी सबै जटिलताहरूबाट बच्न र उपचार खर्च कटौती गर्नका लागि समयमै मधुमेह पत्ता लागेर मधुमेह नियन्त्रणमा राख्नु जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय मधुमेह संघको यस वर्षको विश्व मधुमेह दिवसको अभियान नोभेम्बर महिनाभरि १० लाख मानिसहरूमा मधुमेहको रगत जाँच गरी मधुमेह समयमै पत्ता लगाउनु रहेको छ ।
मधुमेह अहिले महामारीको रूपमा देखिनुका विभिन्न कारणहरू छन् । बढ्दो सहरीकरण, बसाइँ—सराइ, खानपिनमा लापरबाही, गुलियो, चिल्लो र फास्टफुडको बढी सेवन, सुविधासम्पन्न र निस्क्रिय जीवनशैली, नियमित व्यायामको कमी तथा तनाव प्रमुख कारण हुन् । साथै अध्ययनहरूले मिसावट र केमिकलको बढ्दो प्रयोगले पनि मधुमेह बढिरहेको देखिएको छ । मधुमेह रोगथाम गर्न सकिने रोग भएकाले नेपालमा यस रोगसँग सम्बन्धित जनचेतना फैलाउनुपर्ने देखिन्छ । विकट र दुर्गम ठाउँहरूमा मधुमेह सम्बन्धी साधारण रगत जाँच पनि हुन गाह्रो छ । यसले गर्दा मधुमेह समयमै पत्ता नलागी अकालमा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या धेरै छ । त्यसकारण मधुमेह सम्बन्धी चेतना चारैतिर फैलाएर यो रोगबाट हुनसक्ने नराम्रा परिणामहरूबाट बच्न सकिन्छ ।
जोशी मधुमेह रोग विशेषज्ञ हुन् ।
प्रकाशित: कार्तिक २९, २०७३
›डा. अंशुमाली जोशी
पेरिस सम्झौता आलटाल गर्दै विकसित मुलुक ›